Dalkaan.com -Wararka Ugu Danbeeyey » Beesha caalamka oo war kasoo saartay shirka dib u heshiisiinta GALMUDUG.
Xog: Fal uu sarkaal Turkish ah garoonka Muqdisho ugu gaystay wiil Soomaali ah oo sababay shaqo joojin
Xog: Tirada xildhibaanada Ahlu Sunna looga ogolaaday baarlamaanka Galmudug
Askari u Dhashay Uganda oo Meydkiisa Laga Helay Saldhig Ku Yaala Muqdisho
Sawirro: Al-Shabab oo soo bandhigtay qeybtii 2-aad ergo ay ku jiraan haween
CC Shakuur: Khayre waxaa looga fadhiyaa magdhowga dadkii lagu dilay Baydhabo
Beesha caalamka oo war kasoo saartay shirka dib u heshiisiinta GALMUDUG.
War-saxaafadeed ka soo baxay Beesha Caalamka ayaa waxaa looga hadlay Xaalada Galmudug iyo Shirka dib u heshiisiinta Galmudug ee ka socda Magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad Goboleedka Galmudug.
Beesha Caalamka ayaa soo dhaweysay dadaalada dib u hesiisiinta ah ee ka socda Galmudug,isla markaana bogaadisay furitaanka Shirka dib u heshiisiinta ee ka socda Magaalada Duusamareeb,kuwaasi oo looga tashanayo aayaha Galmudug.
Sidoo kale Shirkaas ayay ku tilmaamtay in Muhiima u leeyahay dhismaha galmudug Cusub oo loo dhan yahay iyo inay dhacdo Doorasho xor iyo xalaal ah oo nabad ay ku jiro.
“Waxaan soo dhoweyneynaa ballanqaadka ay muujiyeen dhammaan dhinacyada ay khuseyso geeddi-socodka dib-u-heshiisiin loo dhan yahay oo aan bogaadinno dadaallada ra’iisul Wasaaraha iyo sidoo kale dowlad-goboleedka Galmudug iyo hoggaamiyeyaasha bulshada si ay u isugu keenaan dhammaan bulshooyinka ” ayaa lagu yiri Warka kasoo baxay Beesha Caalamka.
Beesha Caalamka ayaa rajo ka muujisay wada hadalada Galmudug in ay noqdaan kuwa midho dhalo, iyo in Shirku uu asaas u yahay dowlad mideysan oo xasilloon oo ka jirta Galmudug.
Dowladda Soomaaliya ayaa waqti badan ku bixisay Galmudug, waxaana muddo 3 bil ah ku sugnaa deegaanadaas Ra’isulwasaaraha Soomaaliya.
Dowladda Federaalka ayaa ku dadaaleyso inay Galmudug geysato shakhsi iyada ka amar qaato si ay danaheeda ugu gaarto Doorashada madaxweynimo ee Soomaaliya.
Dowladda ayaa horey gacanta ugu dhigtay Maamul Goboleedyada Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed, waxayna ku fashilmatay Puntland iyo Jubbalanad inkastoo aan la ogeyn natiijada ay kala kulmi doonto Doorashada soo socoto ee Galmudug.
Xog: Fal uu sarkaal Turkish ah garoonka Muqdisho ugu gaystay wiil Soomaali ah oo sababay shaqo joojinSeptember 8, 2019
Xog: Tirada xildhibaanada Ahlu Sunna looga ogolaaday baarlamaanka GalmudugSeptember 8, 2019
Askari u Dhashay Uganda oo Meydkiisa Laga Helay Saldhig Ku Yaala MuqdishoSeptember 8, 2019
Sawirro: Al-Shabab oo soo bandhigtay qeybtii 2-aad ergo ay ku jiraan haweenSeptember 8, 2019
CC Shakuur: Khayre waxaa looga fadhiyaa magdhowga dadkii lagu dilay BaydhaboSeptember 8, 2019
Shirka beelaha Galmudug oo qodobo muhiim ah looga hadlayo.September 8, 2019
Meydka sarkaal ka tirsanaa ciidanka AMISOM oo laga helay XALANESeptember 8, 2019
Meydka sarkaal ka tirsanaa Amisom oo laga helay XalaneSeptember 8, 2019
Shirka Dib u heshiisiinta Beelaha Galmudug oo wali dhuusamareeb ka socdaSeptember 8, 2019
Sawirro: Waare oo kulan xasaasi ah la qaatay saraakiil gaartay BeledweyneSeptember 8, 2019
Pakistaan oo Madaxweynaha Hindiya u diiday inuu hawadeeda isticmaalo.September 8, 2019
Trump oo baabi’iyay heshiiskii nabadda ee dalkiisu lagalay Taalibaan.September 8, 2019
Jubaland oo si kulul uga hadashay xariga Wasiir JananSeptember 8, 2019
Dilal kala duwan oo Muqdisho ka dhacay (Faahfaahin)September 8, 2019
FARMAAJO oo markii ugu horreysay ka qeyb galaya shirka golaha guud ee QMSeptember 8, 2019